Lifikile ithuba lezinguquko emithethweni yezwe ukukhuthaza ukutshala emnothweni, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
IBHANGE loMbuso linyuse imalimboleko ngo-50 basis points njengoba isizoba wu-4.75% ngonyaka kusukela namhlanje. UMphathi waleli bhange uMnu Lesetja Kganyago uthe lena yimizamo yokukhalima ukunyuka kwamanani empahla nokwehlisa amandla emali. Uthe amanani kaphethroli kubhekwe ukuthi anyuke afinyelele ku-31.2%, kusuka ku-26.1%.
I-STATISTICS South Africa ithe amanani empahla aqhubekile nokuma ku-5.9% ngo-Ephreli. Ukuthenga impahla embonini ye-retail kwehle ngo-0.3% ngoMashi uma kuqhathaniswa nangoFebhuwari. Kodwa kunyuke ngo-1.3% uma kuqhathaniswa ngonyaka odlule.
IBHODI yeTongaat Hulett iqoke uMnu uDavid Noko ukuthi abe wusihlalo obambile ngemva kokusula kukaMnu uLouis von Zeuner. Le nkampani isiqalile ukubheka usihlalo omusha.
I-STANDARD Bank iqoke uNksz uNonkululeko Nyembezi ukuthi abe wusihlalo omusha webhodi. UNskz uNyembezi uthatha izintambo kuMnu uThulani Sikhulu Gcabashe, osethathe umhlalaphansi. Uwumholi wamabhizinisi omdala njengoba ake waba yisikhulu esiphezulu se-Arcelor Mittal South Africa kanti uke waba nawusihlalo webhodi ye-Alexander Forbes kanti wake wabasebhodini ye-Old Mutual.
INKAMPANI ethuthukisa ingqalasizinda iRaubex isiqoke uNksz uFelicia Msiza ukuthi abe yisikhulu esiphezulu esisha. Uzothatha izintambo kuMnu uRudolf Fourie ngo-Agasti.
I-SOUTH African Reserve Bank (iSARB) igubha iminyaka ewu-100 yaqala ukukhipha imali engamaphepha. Mhla ka-19 Ephreli 2022 kuhlangane iminyaka ewu-100 selokhu iSARB yakhipha imali yokuqala engamaphepha. Imali engamaphepha yakhishwa emva kwezinyanga eziwu-10 kusungulwe iSARB mhla ka-30 Juni 1921.
I-Durban Car Terminal iphule irekhodi layo lonyaka ngokuphatha izimoto eseziqediwe ukwakhiwa ezingu-531 755 esikhathini esiyizinyanga eziwu-12 esiphele ngoMashi. Umkhiqizo oxubile wenze izibalo zezimoto ezingeniswe ezweni zibe wu-53% ezibalweni zonke okufaka kakhulu izimoto ezincane. Kube ngu-34% ezibalweni zonke kusuka ngonyaka odlule. Kusuka ngoSepthemba iDurban Car Terminal izophatha izimoto zakwaFord iRanger. Nezinhlobo ezihlukene zeChery neJAC zizokwenza ukuthi kunyuke umthamo wezimoto.
UMQONDISI-JIKELELE womNyango wezeziMali uMnu uDondo Mogajane uzoshiya kulesi sikhundla uma kuphela inkontileka yakhe ngoJuni. Umnyango umemezele ukuthi uMogajane, oseneminyaka ewu-23 ewusebenzela, ukhethe ukuyobheka amanye amathuba ngaphandle kukahulumeni. Wengeze ngokuthi seluqalile uhlelo lokuqala ukubheka umqondisi-jikelele omusha.
I-AIR Traffic and Navigation Services iqoke uNksz uNozipho Portia Mdawe abe yisikhulu esiphezulu esisha. Uthatha izintambo kuMnu uDumisani Sangweni obebambile kusukela ngo-Ephreli wango-2020.
IBHANGE loMbuso linyuse imalimboleko ngo-25 basis points yafinyelela ku-4.25%. Lesi simemezelo senziwe wuMphathi weBhange loMbuso uMnu uLesetja Kganyago ngoLwesine.
IBHANGE loMbuso selinqume ukuthi alikezukudayisa isabelo salo esiwu-50% elinaso e-African Bank njengoba lithe kubona bonke abebefuna ukusithenga akekho elibone kulungile ukuthi limdayisele. Leli bhange lamemezela ukuthi libona kuzoba ngcono ukuthi lidayise isabelo salo e-African Bank ukugwema ukushayisana kwezinto kwazise amabhange alawulwa yiBhange loMbuso.
I-FNB ithe ukuthumela imali nge-eWallet kunyuke ngo-12% njengoba kuthunyelwe uR31 billion izikhawu eziwu-56 million. Leli bhange lithe bawu-7m abantu abasebenzisa i-eWallet.
IKHOMISHINI yokuNcintisana inqabile ukuthi iCorruseal Group ithenge iNeopak. Ithe ukuhlanganisa lezi zinkampani kuzonciphisa ukuncintisana embonini yazo.
IKHOMISHINI yokuNcintisana isiphakamise ukuthi iCompetition Tribunal iphenye iFirst Rand Limited, iWestbank neToyota Financial Services South Africa Limited ngezinsolo zokuthi babelana amakhasimende nabathenga kubona, nokuwukuphula umthetho olawula ukuncintisana.
Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Adform 728×90 Tag
Izindaba Kugiya ongoti
Lifikile ithuba lezinguquko emithethweni yezwe ukukhuthaza ukutshala emnothweni, kuloba uBusi Mavuso
KULELI sonto uMengameli uMnu uCyril Ramaphosa uzophinda asingathe ingqungquthela yezokutshala yaminyaka yonke. Izobe izama ukunqanda ukwehla kokutshala emnothweni.
Nginxusa uhulumeni ukuthi asebenzise leli thuba ukumemezela izinguquko emthethweni ezizokweseka ukutshala emnothweni. Izibalo zeBhange loMbuso ze-gross fixed capital formation esigabeni sesithathu sonyaka odlule zihleli ku-14,3% we-GDP. Sisekude nalapho iNational Development Plan efuna ukufika khona, okuwu-30% ne-GDP eyayiloku ihleli ngaphansi ka-16.7% ngaphambi kokufika ubhubhane.
Loku kwehla kwezibalo kwenzeka yonke indawo. Umkhakha kahulumeni ubuloku ukwehlisa kancane kancane ukutshala emnothweni eminyakeni emihlanu edlule. Kwehle kakhulu ezimbonini ezizimele ngesikhathi sobhubhane; okwamanje isimo asikabuyeli kwesijwayelekile.
Lezi zingqungquthela zokutshala imali zinomlando wokwenza izinkampani ezizimela zimemezele imisebenzi yezigidigidi zamarandi. Konke loku kulungile kodwa uhulumeni awusitshele ukuthi ngabe loku kuwusizo, ngabe kuyakukhuphula ukutshala noma sisho into ebivele izokwenzeka?
Ngithanda le ngqungquthela iguquke, esikhundleni sokuthi izimboni ezizimele zimemezele imisebenzi, akube wuhulumeni omemezela izinguquko ezizokhuphula ukutshala emnothweni. Yiloku okulawula ukwengeza kwangempela.
Zikhona izindaba ezimnandi mayelana nokuphothulwa kwendali yangesonto elidlule ye-spectrum esengeziwe ezinkampanini zamaselula. Yigxathu elikhulu eliya phambili ekuvuseleleni izinhlaka esikade silicela siyiBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ukuthi lenzeke. Maduzane nogesi, izindleko ze-broadband nokutholakala mhlawumbe yizona zithiyo ezinkulu ekukhuliseni ukusebenza komnotho.
Indali izisize kakhulu izinkampani zamaselula ukuthi zikwazi ukuthola i-spectrum, yangenisela izwe u-R14.4 billion. Izothukulula ukutshala imali okubalulekile njengoba izinkampani zamaselula sezingakwazi ukwakha i-5G namanye ama-network amaselula. Zikhona izinselelo zomthetho ekwenzekeni kwezinto, engithemba ukuthi zizoxazululwa ngendlela efanele.
Loku kungenzeka ngosizo lwezepolitiki oluvela phezulu kuhulumeni. Ezinye izindaba ezimnandi kube wukuchitshiyelwa kuka-schedule 2 ye-Electricity Regulation Act ngonyaka odlule ukukhulula izinkampani ukuthi zikwazi ukwakha izizinda zomkhiqizo ogcina ku-100MW ngaphandle kwencwadi egunyazayo. Amalungu eMineral Council ewodwa alindele ukwakha u-3,900MW ngemali etshaliwe engu-R27bn ngenxa yabasizile ekutheni lokhu kwenzeke.
Nokho njengoba ngibhalile leli thuba liyanqindeka ngenxa yemicikilisho njengoba abatshalimali bengakwazi ukuthola imisebenzi ebhaliswe ngaphansi kwabalawuli bagesi. Uhulumeni kumele ugxile ekuqedeni loku ngokukhulu ukushesha, uvumele izinhlelo zokutshala ezinkulu zikwazi ukwenzeka. Kepha yini enye engenziwa wuhulumeni ukuqaqa ukutshala emnothweni?
Engqondweni yami indawo engenza ushintsho olukhulu yi-logistics. Noma ngabe uhambisa izimpahla ngezikhungo ezithuthayo, ngojantshi noma emgwaqweni, izindleko zokwenza loku eNingizimu Afrika zimba enqolo.
Kube nezimpawu ezinhle kuloku – uhulumeni neTransnet basebenzisana ohlelweni lokuthuthukiswa kwechweba laseThekwini ngokuheha izimboni ezizimele nabatshalimali. Loku akwenzeki ngokushesha okufanele namathuba ayalahleka. Kuyabonakala ukukhula kahle kwechweba laseMaputo, lidlula elaseNingizimu Afrika libe lilawulwa yinkampani ezimele.
Yindaba efanayo nakwaloliwe. Imizila yethu ezweni ayisebenzi kahle. Ukutshala kungavuleleka ngokuthi kunikwe imvume nengqalasizinda ezimbonini ezizimele. Izimpawu ezithembisayo zokwenza lokhu bese ziveziwe kodwa kumele kube nemiphumela emihle. Uhlelo lwethu le-logistics zingadonsa ukutshala okubalulekile ngomthetho ofanele.
Okubalulekile wukuthi lungehlisa izindleko zokusebenza ezweni lonke. Loku kungenza eminye imisebenzi eqale ngesiwombe sesibili sokutshala ukuthi yenzeke kodwa lokhu kungenzeka ngenqubomgomo efanele.
Ngithemba ukuthi uhulumeni uzosebenzisa le ngqungquthela yokutshala imali ukukhombisa ukuthi la mathuba uwathatha njengabalulekile. Iningi lethu embonini ezimele sesikulungele ukutshala uma uhulumeni wenza ukuthi kwenzeke.
Inkinga esanda kwenzeka eChris Hani Baragwanath Academic Hospital yokuthi bangakwazi ukupha iziguli ukudla yinto ehlezi yenzeka ezibhedlela eziningi zikahulumeni. Kuphinde kudlulele nakwezinye izinhlaka zokusebenza eziningi. Ngike ngasho ukuthi lezi zinhlobo zalezi zinkinga sezibekhona isikhathi eside manje futhi ngeke sisavumela ukungasebenzi kahle kwezinhlaka zikahulumeni.
Uma silungisa lezi zinkinga ezithinta izinto ezibalulekile eNingizimu Afrika sizobona ukutshala ezweni kuhamba kahle.
Sisazobona ukuthi kuhlukumeza kanjani ukwehla nokwenyuka kwamanani. Intengo kaphethroli iyanyuka, inani lenzalo yemali likhushulwe ngo-25 basis points. Namanani kagesi e-Eskom aloku eqhubeka enyuka. Loku kuchaza ukuthi ukuthenga kuzokwehla namabhizinisi azothinteka. Lesi sixazululo sashiwo wuNgqongqoshe wezeZimali uMnu u-Enoch Godongwana.
Kufanele kushintshe ukwenza kwezamandla kagesi, ezokuxhumana, kwaloliwe nakwezamanzi nokuthutha indle, kuthuthukiswe ezokuvakasha namakhono anqabile, kuncishiswe imicikilisho.
UNksz uBusi Mavuso yisikhulu esiphezulu seBLSA
Bagcine begxila ebhizinisini lejusi yezithelo obesekuyisikhathi eside bezama ukuchuma kwezamabhizinisi kungalungi. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
May 23, 2022 Funda kabanzi
May 16, 2022 Funda kabanzi
May 9, 2022 Funda kabanzi
WITH ADVERSE FINDINGS?
April 25, 2022 Funda kabanzi
YINI I-DISCLAIMED OPINION
April 11, 2022 Funda kabanzi
April 4, 2022 Funda kabanzi